Samsung way quusatay waxayna siisay taageero iOS barnaamijyadeeda waaweyn | Wararka IPhone
Samsung way quustaa oo waxay siisaa taageero iOS barnaamijyadeeda ugu waaweyn
Waa xaqiiq in dagaalka u dhexeeya Samsung iyo Apple hogaaminta suuqa ayaa sii socota. Si kastaba ha noqotee, waxyaabo yar yar ayaa isbedelaya oo Kuuriyaanka ah ma doonayaan inay waqti ku lumiyaan si ay u soo jiitaan macmiil macruuf ah oo macmiil ah oo ku sharxi kara barnaamijyada Samsung. Dareenkaas, dhaqdhaqaaqyo badan ayaa laga dhex arkayaa shirkadda Aasiya dhexdeeda si ay si hufan barnaamijyadooda ugu helaan kuwa haysta iPhone. Midka ugu horreeya wuxuu ahaa inuu la qabsado isku xirnaanta saacadda 'Gear S2' si uu ula jaanqaado boosteejada tufaaxa. Laakiin waxaa jira wax badan ...
Dhamaan yaa Waxay leeyihiin aaladaha iPhone-ka iyo kuwa kale oo ka socda shirkadda Samsung nasiib ku jiraan. Macluumaad ayaa la baahiyay oo ku saabsan codsiyada ay shirkadda Kuuriya ka shaqeyneyso si ay ula qabsato macruufka waxaana cad in ay jiri doonaan barnaamijyo badan oo ugu dambeyntii haysta oggolaanshaha Kuuriya si ay u noqdaan run. Waa run oo xaaladaha qaarkood ma jiro taariikh la sii dayn karo, laakiin haddii ay ka shaqeynayaan mar hore waa tallaabo wanaagsan marka loo eego falsafaddii hore ee ka dhanka ahayd tartankooda. Miyaadan u malayn? Halkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin mashaariicda hadda socda.
Dhinaca kale, horumarinta barnaamijka 'Gear Fit Manager app' ee loo yaqaan 'iOS' ayaa socda, kaas oo kuu oggolaanaya inaad la wareegto jijin ka soo socota iPhone-kaaga. Dhinaca caafimaadka, kala duwanaanta S Health ee sida tooska ah ula tartanta shirkadda Apple sidoo kale waxay boos ku yeelan doontaa App Store. Sida barnaamijka 'Galaxy View' oo ay ugu mahadcelineyso soosaarida Remote Control iyo Waxyaabaha Fagaaraha Qoyska qaab codsiyo loogu talagalay macruufka. Laakiin intaas maahan, barnaamijka 'iOS Level app' ee aaladaha Samsung, iyo sidoo kale barnaamij dib loo naqshadeeyay oo lagu xakameynayo kaamirooyinkeeda ayaa sidoo kale la filayaa inuu noqdo mid dhab ah oo dukaanku dhawaan ku sugnaan doono. barnaamijyada tufaaxa. Sideed u aragtaa wararkaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung way quustaa oo waxay siisaa taageero iOS barnaamijyadeeda ugu waaweyn
Apple Watch 2 wuxuu bilaabi doonaa wax soo saarkiisa rubuca labaad ee sanadkan
Mid ka mid ah madaxda Microsoft ayaa adeegsada iPhone